Muzvinafundo Jonathan Moyo
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo, pamwe nedzematongerwe enyika, dzinoti zviri nyore kuti ngamera ipinde muburi retsono pane kuti hurumende ikwanise kudzosa kumusha vaive makurukota ehurumende, VaPatrick Zhuwao, VaSaviour Kasukuwere naVaWalter Mzembi.
Vatatu ava vari kupomerwa mhosva dzehuori asi ivo vari kuti inyaya dzezvematongerwo enyika.
Hurumende kuburikidza nebazi revachuchusi reNational Prosecuting Authority yakakumbira hurumende yeSouth Africa kuti idzose kumusha vaimbova makurukota ehurumede vakapotera munyika iyi vachipomerwa mhosva dzehuori.
Asi vari muhupoteri ava vanoti nyaya yavari kudirwa kuZimbabwe yakanangana nezvematongerwo enyika sezvo mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kuvapomera mhosva yekusvibisa zita renyika. Zimbabwe neSouth Africa hadzina chibvumirano chinodzisungura kupanana vasungwa vanenge vachipomerwa mhosva dzakadai kana kuti Extradition Treaty.
Asi hofisi yevachuchusi inoti iri kushandisa chimwe chikumbiro chinonzi Extradition (Designated Countries) Order of 1990 chakaitwa pasi peUnited Nations kuti varume ava vadzoke kuzotongwa.
Asi mukuru weimwe kambani yemagweta muJohannesburg, yeMachingura Attorneys, VaChrispen Machingura vanoti nZimbabwe neSouth Africa, hadzi dyidzane munyaya dzezvemitemo yekudzoserana vanenge vapotera vachitiza mhosva zvikuru dzematongerwo enyika naizvozvo, havaone nyika yeZimbabwe, ichibudirira pachirongwa ichi,
VaMachingura avo vave nemakore makumi gumi nemashanu vachishanda segweta, vaendeerera mberi vachiti VaMoyo naVaKasukuwere havasi vekutanga kupotera kuSouth Africa, vachitiza mhosva dzavari kupomerwa.
VaMachingura vati nyika yeZimbabwe, inokwanisa kutora matanho ichitevedza zvinodiwa nematare, asi matanho aya, anofanira kugutsa mutongi wemhosva kuti dare rigokwanisa kutambira chikumbiro chayo.
Vaenderera mberi vachiti semaziviro avo, nyika yeSouth Africa inozivikanwa zvikuru munyaya dzezvemitemo, naizvozvo havaone ichiramba kutambira chikumbiro chevarume ava chekuti varambe vari munyika iyi.
VaMachingura vatiwo VaMzembi naVaKasukuwer havamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe sezvo vachikwanisa kunotsvagawo hupoteri kudzimwe nyika kana kupikisa nyaya iyi mumatare epamusoro.
Chipangamazano musangano rePolitical Economy South Africa, kana kuti PESA, Doctor Gedion Chitanga vanoti nyaya dziri kupomerwa vaviri ava, dzine chekuita nematongerwo enyika
VaChitanga vanoti hapana chibvumirano chiripo pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe chekupanana vanhu vakaita sevari kudiwa ava.
Mutauririra webazi remuSouth Aferica, rinona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaNelson Kgwete, vati havana chavanoziva nenyaya iyi uyewo Studio 7, inofanira kubvunza hurumende yeZimbabwe.
Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa, VaDavid Hamadziripi vatenda kuti Zimbabwe haina chibvumirano neSouth Africa asi vakati nyika idzi dzine hukama hwakasimba.
Vati hukama uhu ndihwo huchashandiswa munyaya yakafana nenyaya yevaviri ava. Hatina kukwanisa kubata VaKasukuwere sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. Asi tabata VaMzembi avo vati vari kushamisika kuti Zimbabwe iri kuda kuti vadzokere kumusha iyo iri kuramba kudzorera vaimbove mutungamiriri wenyika yeEthiopia, VaMagistu Haile Mariam, avo vakaponda zviuru nezviuru zvevanhu kunyika kwavo
Vaendererawo mberi vachiti ivo VaMunangagwa pavakatizira kunyika yeSouth Africa, hapana akakumbira kuti vadzoswe kumusha.
Panyaya yava Mengistu, VaHamadziripi vanoti havana ruzivo rwakazara rwekuti pane chibvumirano here pakati penyika mbiri idzi. Vati havakwanise kutaura nezve nyaya dzakatarisana naVaKaukuwere naVaMzembi.
Zimbabwe yakamboyedza kudzora varume ava munyika kuburikidza nesangano remapurisa epasi rose re International Criminal Police Organisation (Interpol) asi mukuru wemapurisa VaGodwin Matanga vanoti sangano iri rakatsika madziro.
Vamwe veavo vakambotizira munyika yeSouth Africa, vanosanganisirawo ivo mbune VaJames Makamba, naVaMutumwa Mawere. Pavanhu ava, hapana kana mumwe chete zvake akadzorwa kumusha nehurumende yeSouth Africa.
Panyaya yaVaMawere hurumende yakapihwa mukana wekuti iunganidze humbowo hwekuti vainge vaburitsa mari nemukoto munyika iyi asi inonzi yakakundikana nekuda kushandisa nzira dzekudimbudzira zvaive zvisiri pamutemo nyaya yacho ichibva yaraswa.
Muna 2010, mapurisa emuZimbabwe neSouth Africa aimbopananawo vasungwa zvisiri pamutemo zvakazokonzera mutauro wakanyanya muSouth Africa panyaya inonzi Zimbabwe Rendition mushure mekunge South Africa yaendesa zvisiri pamuemo kuZimbabwe VaWitness Mandeya naVaGrodon Dube vanonzi vakabva vapondwa nemapurisa emuZimbabwe.
VaPritchard Tshuma vakasungwa nemhosva yekuponda muSouth Africa vakaendeswa kuZimbabwe vakabva vatsakatika.